Amanothi amafushane ngempilo kaRafael Alberti | Izincwadi Zamanje
Imbongi enkulu URafael Alberti Wazalwa ngo-1902 edolobheni lase-El Puerto de Santa María, esifundazweni saseCádiz, emndenini owawuthi nakuba ucebe kakhulu ungabhekani nezikhathi zawo zomnotho ezinhle kakhulu. Ngenkathi uRafael osemncane eneminyaka eyi-15, umndeni wonke waya kohlala eMadrid, okwadala ukulangazelela okukhulu olwandle kumbongi waseCádiz owayengumnikazi ngaleso sikhathi owayephuthelwa ukusondela kolwandle.
Ezinsukwini zakhe zokuqala, wayebonakala ethanda kakhulu ukudalwa kwezithombe, umdlalo wokuzilibazisa aqhubeka nokuwuhlakulela kwaze kwaba sekupheleni kwezinsuku zakhe, kepha isifo samaphaphu samphoqa ukuthi achithe isikhathi esiningi embhedeni futhi kusukela lapho yena nezinkondlo baba munye. Ngeke baphinde bahlukane, ngenhlanhla kubo bonke abafundi abasathokozela futhi bahloniphe imisebenzi yezinkondlo ye-Alberti enkulu namuhla.
En Madridku Indawo yokuhlala abafundi uhlangana nababhali abaningi besikhathi leso futhi abe ngumngani wabo.
Kamuva kwagqashuka impi yombango futhi u-Alberti, wahlonishwa ikhomanisi nesishoshovu, uphoqeleka ekudingisweni lapho egcina ukuzinza e-Argentina lapho aqhubeka khona nokubhala nokudweba waze, ngemuva kokudlula eRoma, wabuyela eSpain ngo-1978. Kusukela lapho kuya phambili kwaba nokuhlonishwa okuningi ngomsebenzi wakhe, okugqamisa phakathi kwabo bonke iCervantes Umklomelo owanikezwa ngo-1983 ngomsebenzi omuhle wokuba imbongi nombhali wemidlalo.
Ekugcineni, ngo-1999 eneminyaka engama-96 ubudala, ukuboshwa ngenxa yokuphefumula komzimba kuqeda impilo yakhe edolobheni lakubo lase I-El Puerto de Santa María, lapho okungenani akwazi ukucabanga ngomngane wakhe olwandle kwaze kwaba yizikhathi zokugcina zokuhlala nathi.
Isithombe - Izincwadi nezindawo
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » URafael Alberti biography
Ngikuthandile ukuba sekhasini lakho… ngiphelele impela, ngiyabonga ngokwaba kwakho… imikhonzo nempelasonto enhle…. kubabaza uTiziana
Abaphumelele uHarvey ngo-2012